Blog of Nyein Chan Yar: about: biscuit
Posted by dathana at Saturday, July 08, 2006
Anonymous July 08, 2006 7:25 PM
kong lite tae.ah kyan.
မေ July 08, 2006 8:02 PM
ရေရေလည်လည်မိုက်တယ်။ အရုပ်တွေ၊ အသံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ recipe တောင် ပါလိုက်သေးတယ်။ link ပါတဲ့ ကဗျာခေတ်ကြီး ရောက်ပြီပေါ့နော်။ :P ခုမှသိတော့တယ် Ko Myouez က link ချိတ်ရတာ ၀ါသနာပါတာကိုး :D (ဘန်းစကားကို သဘောပေါက်တယ်...ဟုတ်) :P
P.S: သူမကို ပြောလိုက်ပါ၊ ဘီစကွတ်စားပြီးတိုင်း သွားတိုက်ပါလို့၊ မဟုတ်ရင် ငယ်ငယ်နဲ့ သွားတွေကုန်လိမ့်မယ် :P
Anonymous July 09, 2006 12:43 AM
Harrrrr! Yae lal mite tal kwarr!! LOL
Link htal tar lalayan mite. A ko sat lote, ur own original link poems. :P
Bal ka nay bal lo, biscuit pyit twar lal taw tape naw ma lal lite buu. haha
But I like it tho. :P
dathana July 09, 2006 9:44 PM
ဒီလို comment ကောင်း ကောင်း တွေ ကြားရတာ ကျွန်တော် ရေလည် ပျော်ပါတယ်။ ကျေးဇူး ကျေးဇူး ကျေးဇူး :) :) :)
NLS July 12, 2006 6:53 PM
အီးခေတ်မှာ အီးကဗျာပေါ့.. အဲလိုလား အကိုရေ့။ အကြံမိုက်တယ်။
dathana July 12, 2006 7:58 PM
ဟာ!!!! သွားပါပြီ ငါ့ကဗျာတော့ အီးကဗျာ ဖြစ်ရရှာပြီ
NLS July 13, 2006 3:02 PM
Anonymous February 04, 2009 9:30 AM